ပုံတွေတိုက်ရိုက်တင်ချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
ပုံတွေကို တိုက်ရိုက်တင်လို့ရအောင် လုပ်ပေးပါလားဗျ... ပုံတင်ဖို့ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်လို့ပါ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... :77::77::77::77:
တိုက်ရိုက်တင်တယ်ဆိုတာက Copy Paste ကိုပြောတာလားမသိဘူး။ အဲလိုတော့ မရဘူးဗျ။ တင်ဖို့ပုံကို အရင် Upload လုပ်ရပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးကတော့ အခု MZ ထဲက ကိုယ့်ရဲ့ Profile အောက်မှာ Albums ဆိုတဲ့အောက်မှာ အရင် Upload လုပ်ပြီးတင်ပါလားဗျ။
တိုက်ရိုက် upload တင်တာကိုပြောတာပါ .. စက်ထဲကနေ တိုက်ရိုက်တင်တာကိုလေဗျ
အရင်ကရသလိုပဲ. အခုဖြုတ်လိုက်တာထင်တယ်. imageshack မှာတင်လေ. အဆင်ပြေပါတယ်
http://www.mysteryzillion.org/forums/forumdisplay.php?f=7 ဒီမှာမပြင်ရသေးဘူးဗျ design
Thank . fixed
ှှQuick Links\_ Your Profile\_ Albums က Add Album\_ title ဖြည့်ပြီးရင် submit\_ upload pictures.
For First wrote: »
အဲဒီ Album ဆိုတာကြီးကိုမတွေလို့ဗျ။:D
ညာဘက်ဘေးမှာ Friends ရဲ့ အောက်မှာလေ ။ ပုံမရှိသေးရင် ဘားတန်းသေးသေးလေး ဘဲရှိလိမ့်မယ်။
ရသွားပြီ ကျေးဇူတင်ပါတယ် thank လုပ်ရုံတင်မက စာပါရေးပြီးတော့ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။